﻿ मृत जोडीले तुलसीको मठ छेउ हात समाते !
मृत जोडीले तुलसीको मठ छेउ हात समाते !
बुधबार ०१, साउन २०७६
इटहरी । धेरै जोडीले सँगै जिउने सँगै मर्ने कसम खाएका हुन्छन् । तर थोरैको मात्र कसम पुरा हुन्छ । इटहरी वडा नं. १३ मा एक वृद्ध दम्पत्तीको एउटै समयमा ज्यान गएको छ । उनीहरुलाई पछि एउटै चितामा राखेर जलाइयो ।
मंगलबार राति एक वृद्ध जोडीको एकैपटक मृत्युभएको छ । यस्तो घटना निकै दुर्लभ मानिन्छ ।
इटहरी १३ स्थित गणेशमार्ग टोलमा बस्ने ७८ वर्षीया नरमदादेवी भट्टराईको मंगलबार ७ः४५ बजे मृत्यु भयो । उनी केही दिनयता बिरामी थिइन् । उनलाई एक साताअघि मात्र बिराटनगरको नोबेल अस्पतालका चिकित्सकले उपचार नहुने भनेर घरै लान सुझाव दिएको बुहारी सीताले जानकारी दिइन् ।
तर, उनका ८८ वर्षीया श्रीमान् टिकाप्रसाद भट्टराई भने निरोगी थिए । उनलाई कुनै रोग लागेको थिएन । श्रीमती बितेपछि उनी आफ्ना सन्तानलाई नरुन सम्झाइरहेका थिए । तर लगत्तै उनी बिरामी भए । ब्लडप्रेसर निकै कम भयो । तत्कालै उनलाई विराटनगरस्थित नोबेल अस्पताल लगियो । अस्पतालले उनको मृत्यु भएको घोषणा गरिदियो ।
छिमेकीहरुका अनुसार शव वहान भेट्न ढिला भएको कारण उनलाई राति १ बजे मात्र घर ल्याइएको थियो ।
श्रीमान श्रीमतीको सँगै मृत्यु भएपछि सबै अचम्मित बनेका थिए भने घर परिवार झन् शोकमा डुबेका थिए ।
पछि जब दुवैको शवलाई हिन्दू परम्पराअनुसार तुलसीको मोठ नजिक राखियो, तब एकछिनमा वरीपरी बसेर हेरिरहनेहरु छक्क पर्ने घटना भयो ।
दुवैले एक अर्काको हात समातेको देखिएको स्थानीयले बताए । नर्मदाले टिकाको हात समातेको पाइएको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताए । त्यो देखेर कतिले चाहिँ मृत शरीर राख्दा संयोगवश जोडिएको भनेका थिए ।
मृतक जोडीका चार छोरा र दुई छोरी गरी ६ सन्तान छन् । उनीहरु कान्छा छोरा राजन प्रसाद र कान्छी बुहारी सितासंग बस्दै आएका थिए ।
इटहरीमा एकै रात कालगतीले श्रीमान श्रीमतीको मृत्यु, एउटै चितामा जलाइयो
बिहीबार ०२, साउन २०७६ &#2407;&#2407;:&#2410;&#2408;
Sab bahan vetna dhila vayara ghar dhilo lyako vanney manxey ko hun ? Bastabikta nabuji j pae tyai hawa ko bhar ma nalekhum
शुक्रबार ०३, साउन २०७६ &#2406;&#2414;:&#2408;&#2406;
बास्तबिकता बुझेर लेख्नु पर्थ्यो कसले भन्यो ambulance पाउन ढिलो भयो भनेर ?